» मिस नेपालको फाईनल लाईभ शो टिकट २ हजारमा , यसरी किन्नुहोस् टिकट
मिस नेपालको फाईनल लाईभ शो टिकट २ हजारमा , यसरी किन्नुहोस् टिकट
२२ बैशाख २०७६, आईतवार १४:५३
चन्द्र घलानमकवानपुर, २२ बैशाख । मिस नेपालको फाईनल लाईभ शो दर्शकहरुले कम्तिमा २ हजारमा हेर्न पाउनेछन् । मिस नेपालको फाईनलमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कम्तिमा नगद २ हजारको टिकटको व्यवस्था गरिएका कारण यो सम्भवन भएको हो । मिस नेपालका उत्कृष्ट २५ प्रतिस्पर्धीसँगै मिस नेपाल २०१९ को क्राउनिङ मोमेन्टलाईलाई दर्शकहरुले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनेछन् ।
मिस नेपालको फाईनलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनका लागि आयोजक द हिडेन ट्रेजरले २ हजार र ३ हजारको टिकटको व्यवस्था गरेको हो । मिस नेपालको २५ औँ सँस्करणको फाईनल मे ९ तारिख अर्थात यही बैशाख २६ गते गरिँदै छ । टिकटमा मे ६ तारिख साँझ ५ बजेसम्मका लागि २५ प्रतिशत डिस्काउन्ट समेत गरिएको छ । बैशाख २६ गते बिहीबार कार्यक्रम किर्तिपुरको ल्याब्रोटरी हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रिमाइजेजमा साँझ साढे ७ बजे हुनेछ । टिकटका लागि रकम भुक्तानी मोबाईल बैँकिङ मार्फत फोन पे र ईभेन्टस् डट ईसेवा डटकम डट एनपी मार्फत गर्न सकिने छ । मिस नेपालको फाईनल नजिकिएसँगै अहिले मिस नेपालका उत्कृष्ट २५ जना प्रतियोगीहरु विभिन्न विधाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । उत्कृष्ट २५ मा परेकाहरुले मिस एथलेट, फेस अफ फ्यासिनो, मिस ग्ल्यामर लगायतका उपाधिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मिस नेपालको फाईनलमा पुराउन सक्ने ‘मिस पपुलर च्वाईस’ का लागि अहिले बिप म्यासेञ्जरबाट भोटिङ समेत भईरहेको छ । हेर्नुहोस् पुरा भिडियो–
मिस नेपालको उत्कृष्ट २५ मा काठमाडौँकी निशा पाठक, पोखराकी एलिशा जोशी, काठमाडौँकी सोफिया भुजेल, रिया बस्नेत,अनुष्का श्रेष्ठ, जेन्नी महर्जन, ललितपुरकी अस्मिता महर्जन, काठमाडौँकी किरण थापा, प्रदिप्ता अधिकारी, ललितपुरकी नितिका कर्मचार्य, काठमाडौँकी रोज लामा,पोखराकी सारा बजिमाया, हात्तिवन ललितपुरकी लक्ष्मी राउत, काठमाडौँकी रक्षा उप्रेती, भक्तपुरकी मीरा कक्षपति, मोरङकी जेनिशा थपलिया, झापाकी पुजा श्रेष्ठ, चितवनकी विपना सुवेदी, ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारी, झापाकी प्रकृति कट्वाल, चितवनकी न्यान्सी बोगटी, भैरहवाकी शिवानी घिमिरे, काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार, प्रथा अधिकारी र भैरहवाकी संस्कृति घिमिरे रहेकी छिन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।